IScoutsee: Yenza imali ngezeNtlalo ngeNdawo yeVenkile yokuDibanisa | Martech Zone
IScoutsee: Yenza imali ngezeNtlalo ngeNdawo yeVenkile yokuDibana
NgoLwesine, Agasti 4, 2016 Douglas Karr
Scoutsee is Isixhobo esiphathwayo esivumela nabani na ukuba enze imali ngokwazisa iimveliso abazithandayo nabazisebenzisa mihla le kwi-Instagram, Facebook nakuTwitter. Indlela esemva kweqonga intle kakhulu. Yakha ivenkile yakho kwiScoutsee, yongeza iimveliso zakho, emva koko usetyenziso lweselfowni lwenza ukuba wabelane ngohlaziyo kwezi mveliso kunye ne-URL efinyeziweyo kwimveliso Ivenkile yakho. Ukuba imveliso ithengwa ngeposi, umsebenzisi weScoutsee ufumana ikhomishini kwintengiso, ngesiqhelo phakathi kweepesenti ezintandathu ukuya kwezilishumi zexabiso lokuthenga.
Iimpembelelo kwinethiwekhi yoluntu zonke zijolise kubo iimpembelelo zenethiwekhi kunye nabanye abarhwebi kwintengiselwano yokuthengisa iimveliso zorhwebo. I-Scoutsee yenza ukuba izigidi zabaphembeleli kwi-Instagram baququzelele ezabo iintengiselwano, ngokukodwa okanye ngokuthe ngqo kwiimpawu. Kwi-Instagram, kukho abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezithandathu abanabalandeli abangaphezu kwe-10,000. UTom Kwon, umseki kunye ne-CEO yeScoutsee.
Iimpawu zeScoutsee zibandakanya:
I-Instagram eneevenkile -Qhubeka nokwabelana ngento oyithandayo kwi-Instagram kwaye ukhethe into ofuna ukuyenza ukuba ithengwe. Imifanekiso yemveliso kunye nezithuba kwi-Instagram drive Abalandeli kwivenkile yomsebenzisi weScoutsee yeemveliso ezikhutshiweyo, nganye inekhonkco ngqo lokuthenga. Xa kuthengiwe, ikhomishini idluliselwa kwi-PayPal yomsebenzisi okanye kwi-akhawunti yebhanki.
Indawo yoGcino lwaBantu -Lungisa ngokulula kwaye ukhuthaze iimveliso ozithandayo kunye nokuzisebenzisa mihla le.
Izigidi zeMveliso -Khetha iimveliso ezivela kumawaka eemveliso kwaye unxibelelane ngokulula neposti yakho. Ikhathalogu yemveliso yeScoutsee iqulethe ngaphezu kwe-8,000 yeemveliso, kubandakanya iAmazon.com, iRakuten kunye ne-EBay, kunye namakhulu ezigidi zeemveliso kuwo onke amacandelo.
Ideshibhodi yexesha lokwenyani -Jonga kwaye uhlalutye iiposti zakho ezinokuthengwa kunye nendlela indawo yakho yokugcina esebenza ngayo
Khuphela usetyenziso lweScoutsee!
Scoutsee isebenza kunye neempawu kunye neearhente zokuphuhlisa iiphakheji yenkuthazo ngokwesiko yokugaya Iiscoutes kwaye ibonelela ngedashboard yokulandelela ukusebenza.
I-Scoutsee yavavanywa yi-beta kwaye ngoku iceba ukumilisela intsebenziswano yayo ne-Spartan Race, inkampani ehamba phambili yomdyarho wehlabathi. Umdyarho weSpartan wonyusa uluntu lwayo olunomdla, olwalukhuthaza iminyhadala kunye neemveliso zendlela yokuphila ngokusebenzisa iiposti ezinokuthenjwa ezixhaswe nguScoutsee kwi-Instagram kulandelo lwabo olukhulu. Cofa kwiirhafu ubone ukonyuka kwamanani aphindwe kabini kunye nokuguqulwa kakhulu kumgangatho wecandelo.
tags: ideshboard edibeneyourhwebo umanyanisoinethiwekhi yokudibanaindawo engaphambi kwevenkileAmazonebayukuthengisa okunempembeleloinstagramIvenkile ye-instagramrakutenumlindiIvenkile ye-instagramintengiso yeendaba zentengisotom kwon
Iindlela ezi-7 zeNtengiso eziKhuthaza ukuThembana kunye neZabelo
Agasti 16, 2016 ngo-7: 07 PM
Douglas, le nto ipholile ngokwenene! Andikaze ndiyive le nto ngaphambili kodwa ngokuqinisekileyo ndiya kujonga kuyo. Enkoso ngokwabelana!